ओलीको यू टर्नमा प्रचण्डको त्यो एक कल, वामदेवलाई तड्पाउने योजना - Sankalpa Khabar
2. माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने
3. घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था: एक संक्षिप्त टिप्पणी
ओलीको यू टर्नमा प्रचण्डको त्यो एक कल, वामदेवलाई तड्पाउने योजना
२१ भाद्र ०७:४९
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने अडानमा रहेपनि पार्टी भित्र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड हावी भएपछि बाध्य भएर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको सिफारिस गरेका छन् । सचिवालय बैठक अघि प्रचण्डको फोनले लल्याकलुलुक भएका ओलीले त्यसैदिनको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई सिफरिस गर्ने निर्णय भएको थियो । उनी आफ्नो ‘चट्टानी अडान’ बाट एकाएक ‘युटर्न’ हुनुमा बिहानै प्रचण्डको फोन थियो ।
बुधबार बस्ने सचिबालयको बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डामा वामदेबलाई राष्ट्रियसभा पठाउने एजेण्डामा ओलीले आनाकानी गरेको महासचिब बिष्णु पौडेलमार्फत प्रचण्डले थाहा पाएका थिए । फागुन १४ मा भएको सचिबालयको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प नरहेको भनेर ओलीलाई प्रचण्डले सम्झाएका थिए । त्यही बेलुकी वामदेबले पनि ओलीसँग भेटी उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । बुधबारको भेटमा प्रचण्ड र बामदेब दुबैलाई खुलस्त जबाफ नदिएका ओलीको मनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नै घर गरिरहेका थिए । ओलीसँगको भेटमा भएका कुराको बारेमा गौतमले प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधब नेपाल र झलनाथलाई मंगलबार राती नै जानकारी गराई सकेका थिए । बामदेबको जानकारीपछि बरिष्ठ नेताहरु र प्रचण्डको कुरा भएको थियो । समूहको नेता तपाई भएकाले यसबारेमा ओलीसँग बिहानै प्रष्टाप्रष्टी कुरा गर्नू भनेर बरिष्ठ नेताहरुले प्रचण्डलाई जिम्मा दिए अनुसार बुधबार बिहानै प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर निर्णय कार्यान्वयन नगरे अवस्था राम्रो नहुने भन्दै एकताको लागि मात्रै त्याग गरेको जनाएका थिए । मलाई माधब कमरेडहरुले ओलीसँग मिल्नुभयो भनेर कचकच गरिरहनु भएको छ । दुई अध्यक्ष मिलौ भनेर तपाईको पनि पटक–पटक आग्रहलाई मैले सम्मान गरेको हुँ । तर तपाई आफ्नो बिगतकै जस्तो आफ्नै अडानमा रहने हो भने म पनि सोच्छु । बामदेबजीलाई आजैको बैठकबाट अघिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रियसभामा लैजाने एजेण्डाका लागि बिष्णुजीलाई भन्नुहोस । यसमा तपाई सिरियस हुनुहोस ।
प्रचण्डको यस्तो धम्कीपूर्ण भाषाको फोनले ओलीमा निकै बेचैनी ल्याईदियो । उनले तत्कालै महासचिब बिष्णु पौडेललाई प्रचण्डसँगको कुराकानीका बारेमा सेयर गरे । महासचिब पौडेल पनि बामदेबलाई जसरी भए पनि राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए । उनले बामदेबलाई आजै निर्णय नगर्ने हो भने निकै ठूलो संकट आउन सक्नेबारे ओलीलाई सचेत गराए । फेरि प्रचण्ड, माधब, बामदेब, झलनाथ र नारायणकाजीबिच बलियो एकता हुन गई तपाई सचिबालयमा अल्पमतमा पर्ने र यसले निकै ठूलो नोक्सानी गर्ने कुरा बिष्णुले ओलीलाई सबिस्तार सुनाए । प्रचण्ड, माधब र झलनाथजीको आजको एकल मुद्धा बामदेबलाई लैजाने भन्ने छ । यसमा तपाईले तुरुन्तै स्टेप चाल्नपर्छ भनेर पौडेलले ओलीमा त्रास भरिदिए । बिष्णु पौडेलसँग भएको कुरा ओलीले आफ्नो कोर समूहमा फोनबाटै शेयरिङ गरे । शंकर पोखरेलले बामदेबलाई बनाउने तर त्यो प्रचण्ड र अरु बरिष्ठ नेताहरुको दबाबले होइन, आफ्नै रुचीले बनाएको सन्देश प्रबाह हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिए । शंकरले ओलीलाई म युवराजसँग कुरा गरेर फोन गरौला भन्दै फोन राखिदिए । तत्कालै युवराज खतिवडासँग सम्पर्क गरी प्रचण्ड र बरिष्ठ नेताहरुले बामदेबको बिषयलाई लिएर ओलीलाई चेतावानी दिन थालेकाले प्रधानमन्त्री फेरि संकटमा पर्नु भएको भन्दै यसमा सहयोग गर्नुपर्यो भने । शंकर पोखरेलको आशय युवराज आफैले राष्ट्रिय सभामा जान्न भनिदिए यो संकट सजिलै टर्छ भन्ने थियो । शंकरको आशय युवराजले बुझिहाले । उनले म नै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर समस्या समाधानको उपाय बताइदिन्छु भनेर शंकरलाई खतिवडाले आश्वास्त पारे । युबराजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर बिकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा आफू जानकार रहेको र पार्टीमा भर्खरै देखिएको एकता फेरि आफ्नो कारणले भत्कन नदिने भन्दै आफू कुनै हालतमा राष्ट्रिय सभामा जाने मनसाय नभएको बताए । खतिवडाको फोनले भने ओली निकै गम्भीर भए । उनले ११ बजेको बैठक स्थगित गरेर ३ बजे सारे अनि चिसो दिमागले सोच्न थाले । यो बिचमा खतिवडाले त्याग गरे भनेर ओलीको कोर समूहमा खासखुस चल्न थालको थियो ।
प्रचण्डलगायत बरिष्ठ नेताहरु वामदेबलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा दृढ थिए । बैठक सुरु भयो । महासचिब पौडेलले छलफलका केही एजेण्डा प्रस्तुत गरे । तर त्यहाँ बामदेबका बारेमा कुनै एजेण्डा थिएन । सचिबालय सदस्यहरु मुखामुख गर्न के थालेका थिए । ओलीले बामदेबजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने एजेण्डा थप्न भने । पौडेलसँग ओलीले बामदेबलाई म नै प्रस्ताब गर्छु भनेर भनेका रहेछन् । यसपछि वामदेबको एजेण्डा कुनै छलफल नै नभई पारित भइहाल्यो । यसो गरेर ओलीले अरुको दबाबमा नभई आफूलाई संकटमा सहयोग गरेको हुदा मैले नै राष्ट्रियसभामा लगेको हो भनेर वामदेबलाई जबर्जस्ती सन्देश दिन खोजे । त्यसपछि फूरुंग परेका वामदेवलाई शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गर्नुपर्नेमा ओलीले सिफारिस नगरी तड्पाएर राखेका छन् ।
टोकियो ओलम्पिकः आयोजक जापान १० स्वर्णसहित शीर्ष स्थानमा
१३ श्रावण ०६:५०
पूर्वयुवराजकी छोरी पूर्णिकाद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई लठेब्रो र अपांगको संज्ञा
७ श्रावण १६:१९
७ श्रावण ०६:४२
७ श्रावण २०:४०
१३ श्रावण ११:२४
१३ श्रावण ११:२३
१३ श्रावण ११:१२
पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा को को सहभागी ?
१३ श्रावण १०:५९
१३ श्रावण १०:५१